17/09/2021 - ALANZAYAR
ပင်ပန်းတယ်လို့ တွေးတိုင်း ငါတို့နောက်မှာ ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရှေ့ဆက်နေခဲ့တယ်လို့ PDF သူရဲကောင်းတို့၏ ပြောစကား
ပင်ပန်းတယ်လို့ တွေးတိုင်း ငါတို့နောက်မှာ ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရှေ့ဆက်နေခဲ့တယ်လို့ PDF သူရဲကောင်းတို့၏ ပြောစကား ပင်ပန်းတယ်လို့တွေးတိုင်းငါတို့နောက်မှာ ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရှေ့ဆက်နေခဲ့ကြောင်း PDF သူရဲကောင်းတို့က ဤသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နံနက် (၄) နာရီထပြေးရင်း ဘယ်သူအတွက်လဲပြည်သူအတွက်ပဲ ပြည်သူအတွက်ပဲ ဘာလုပ်နေလဲ လေ့ကျင့်နေတယ် လေ့ကျင့်နေတယ် […]
မြေးဖြစ်သူ၏မင်္ဂလာပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင် မြေးမလေးမျက်နှာငယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် နောက်ကွယ်ကနေသာ ခိုးကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေခဲ့သည့်အဖွားအို
မြေးဖြစ်သူ၏မင်္ဂလာပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင် မြေးမလေးမျက်နှာငယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် နောက်ကွယ်ကနေသာ ခိုးကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေခဲ့သည့်အဖွားအို မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးထဲမှ တစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာပွဲလေးကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီဆိုလျှင် မင်္ဂလာဆောင်သူ၏ ဘဝရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြည့်ဝခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ယခုတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော အဖွားတစ်ဦး၏ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ အခြားမြင်တွေ့ရသူများကို အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်စေခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအဖွားအိုဟာ မြေးမလေးဖြစ်သူ၏ မင်္ဂလာပွဲကြောင့် […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မခံလိုက်တဲ့ စာအိတ် (၂) ခု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မခံလိုက်တဲ့ စာအိတ် (၂) ခု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ပေးပို့သည်ဆိုသော စာအိတ်နှစ်အိတ်ကို သူမကလက်မခံဘဲ ” ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ကသာ ဆုံးဖြတ်ရမည်ဆိုကာ” ပြန်ပေးလိုက်သည်ဟု သူမ၏ရှေ့နေတစ်ဦး အပြောအရ သိရသည်။ ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ကာကီရောင်စာအိတ်ရှည်နှစ်လုံးအား နေပြည်တော် ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ် အထူးတရားရုံးတွင် ယနေ့ရုံးချိန်းထွက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ […]
စာဖတ်သူပရိသတ်အားလုံးကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းအတွက် သားဖြစ်သူမင်းမော်ကွန်းရေးတဲ့စာလေး
စာဖတ်သူပရိသတ်အားလုံးကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းအတွက် သားဖြစ်သူမင်းမော်ကွန်းရေးတဲ့စာလေး မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီရေ စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်အပေါင်းအတွက် ယခုပြောပြချင်တာလေးကတော့ အကိုဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မင်းသား မင်းမော်ကွန်းနှင့် ဖခင် သရုပ်ဆောင် မင်းသားဇင်ဝိုင်းကို စိတ်ပူပြီး ရင်တွင်း စကားတွေ ပြောပြလာတဲ့ Kyi Thar Hyay Lwin […]
ရန်ကုန်မြို့ထဲကို အထူးတပ်ဖွဲ့များရောက်နေပြီ see more…..
ရန်ကုန်မြို့ထဲကို အထူးတပ်ဖွဲ့များရောက်နေပြီ see more….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။….. ရန်ကုန်မြို့လယ်က မီးပွိုင့်မိနေတဲ့စစ်ကားနဲ့ရဲကား ဗုံးဖောက်ခွဲမှုမှာ ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။….. ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို… ရန်ကုန်မြို့ထဲကို အထူးတပ်ဖွဲ့များရောက်နေပြီ see more….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။…. ရန်ကုန်မြို့လယ်က မီးပွိုင့်မိနေတဲ့စစ်ကားနဲ့ရဲကား ဗုံးဖောက်ခွဲမှုမှာ ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။….. […]
သမီး ၆ယောက်လုံးမှာ အချောလေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့် သားရှင်ဖက်ကနေ အဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့ပေးစားပါဆိုပြီး ဖခင်ဖြစ်သူထံ ခွင့်တောင်းနေကြသည့်အဖြစ်
သမီး ၆ယောက်လုံးမှာ အချောလေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့် သားရှင်ဖက်ကနေ အဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့ပေးစားပါဆိုပြီး ဖခင်ဖြစ်သူထံ ခွင့်တောင်းနေကြသည့်အဖြစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ညီအစ်မ ၆ယောက်သည် ချောမောလှပပြီး သက်တူရွယ်တူ တစ်ဆင်တည်းတွေဖြစ်နေ၍ မသိသူများအတွက် ညီအစ်မတွေဟု မထင်ပဲ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအဖြစ် မှားယွင်းခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် ဖခင်ဖြစ်သူသည် သားလေးအရမ်းလိုချင်ခဲ့ရာ တစ်ယောက်မှမပါ၍ စိတ်ပျက်အားငယ်ခဲ့သော်လည်း သမီးလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာသောအခါ […]
အထူးသတင်းကောင်း…. မုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ စစ်ကောင်စီ မြန်မာဘီယာဆိုင်နှင့် mytel ရုံးအား ဗုံးဖောက်ခွဲခံရ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ အင်တာနက်ဖြတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ စစ်ကောင်စီက စစ်အင်အားတိုးချဲ့ထား မင်းကင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့ တောင်တွင်းကြီးကြီးဒေသ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကို ကြားဖြတ်ဝင်တိုက် အစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့ နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းထူးများကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို အောက်ကရုပ်သံဖိုင်တွင် ၀င်ေ၇ာက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ […]
သံများကို ဖြတ်တောက်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသော ဖြတ်စက်ဖြင့် ဆံပင်ညှပ်ပေးရာမှ နာမည်အလွန်ကြီးလာခဲ့သည့် ဆံပင်ညှပ်ဆရာ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလတွင် လူသားတို့သည် စီးပွားရေးတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်တော့မည်ဆိုပါက သာမန်ထက်ပိုသော စွဲဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ခေတ်နောက်ကျမှုမရှိစေဘဲ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှသာ အောင်မြင်လာမည်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်လည်း ဆံပင်ညှပ်ဆရာ အမျိုးသားတစ်ဦး၏ တီထွင်ဖန်တီးလိုက်သည့် ဆံပင်ညှပ်သည့်ပုံစံဟာလည်း အလွန်နာမည်ကြီးလာခဲ့သော်လည်း ညှပ်ရန်ဆန္ဒမရှိသူကသာ များပြားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာဟာ […]
ဇနီး ၁၆ ဦးနဲ့ ကလေး ၁၅၁ ဦးရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ နောက်ထပ် ဇနီး ၁၀၀ နဲ့ ကလေး ၁၀၀၀ ရှိရန် ရည်မှန်းချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ အသက် ၆၆နှစ် အမျိုးသား
ဇနီး ၁၆ ဦးနဲ့ ကလေး ၁၅၁ ဦးရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ နောက်ထပ် ဇနီး ၁၀၀ နဲ့ ကလေး ၁၀၀၀ ရှိရန် ရည်မှန်းချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ အသက် ၆၆နှစ် အမျိုးသား အာဖရိကနိုင်ငံ၊ Zimbabwe ရှိ ဇနီး ၁၆ ဦးနဲ့ ကလေး […]
ပေါင်မုန့်အချပ်(၁၀၀)ကို မိနစ်(၄၀)အတွင်း တစ်ထိုင်တည်း စိန်ခေါ်ပြီးစားပြခဲ့သူ
ပေါင်မုန့်အချပ်(၁၀၀)ကို မိနစ်(၄၀)အတွင်း တစ်ထိုင်တည်း စိန်ခေါ်ပြီးစားပြခဲ့သူ YouTube စတားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Hot Dog အစားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုကြီးကိုလည်း လောလောလတ်လတ် ရရှိထားတဲ့ Matt Stonie အသက်(၂၅)နှစ်ဟာ အခုတစ်ခါမှာလည်း အများကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်မှတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်အချပ် (၁၀၀)ကို မိနစ်(၄၀)အတွင်း အပြီးစားပြခဲ့ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်အချပ်ပေါင်း (၁၀၀)ရဲ့ အလေးချိန်ဟာ […]